Nnwom 71 NA-TWI - Akwakoraa mpaebɔ - Awurade, maba wo - Bible Gateway
Nnwom 70Nnwom 72
Nnwom 71 Nkwa Asem (NA-TWI)
71 Awurade, maba wo nkyɛn sɛ ma me guankɔbea. Mma wonnni me so da! 2 Esiane sɛ woyɛ ɔtreneeni nti, boa me na gye me. Tie me na gye me nkwa! 3 Fa me sie wɔ wo nwini ase ne w’abankɛse mu, fa bɔ me ho ban; wone me guankɔbea ne me hwɛfo. 4 Me Nyankopɔn gye me fi amumɔyɛfo ne atirimɔdenfo tumi ne nnebɔneyɛfo nsam. 5 Awurade, m’ani da wo so. Mede me ho too wo so bere a na misua. 6 Me nkwa nna nyinaa, mede me ho ato wo so. Efi bere a wɔwoo me, woabɔ me ho ban. Mɛkamfo wo daa. 7 M’abrabɔ ayɛ nhwɛso ama nnipa pii efisɛ, woyɛ me gyefo a woyɛ den. 8 Fi anɔpa kosi anwummere, mekamfo na meda w’anuonyam adi.